Home Love Story Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 8aad
Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 8aad
Bile: Gabadhaaan in aadan jecleyn oo aadan dan ka laheyn waan dareemayaa maxaa sidaan oo dhan ugu lugoyneysaa maad runta u sheegtid.
Ma anigaa lugoynayo mise iyada is lugoyneyso.
Adiga taada ka bax oo runta u sheeg ileyn hadalkaaga macaan ayaa rajo ku sii abuureysee.
Taas ka bax saaxiib maxay tahay warqada sidaan oo dhan naxariista kugu gashay bal ii aqri aan maqlee sida ay u cataaweyso.
Horaa loo yiri ‘’waa macaan anba waa qaraar kolba waa siduu kuu soo maree’’
Waa runtaa warqada nooo aqri
In aan aqriyo anigaa jecel ileyn adiga markaad aqrineyso wax dhadhan ma lahaaneysee
Waa runtaa adigaa abwaankii jaceylka ah aqri hee
Bille markiiba warqadii ayaa uu kala furay oo uu aqris ku bilaabay sidaan ayaa ayna u qorneyd
To: Macaankii Nafteyda
Abid sidaan xalay kuu dareemay nafteyda qofna weligeed uma tabin waxaa tahay nuurkii nafteyda midkaan ku kalsoonaaw naftaan dartaa ayaa ay u dhibtooneysaa ee fariintaada waa quudkii nafteyda aan helo macaane ereyadaan hoose si weyn u dhuux waxa ay ka turjumeysaa sida aad kuu tabayo.
Laama door habeenkii ladiwaayey
Lulushadaa wadnaha sow
Lahan iguma soo kaco
Sida nugul har galay
Garka liig ku yeeshay
Sida geenyo labeebaa
Intaa lee jaraa lulaayaa
Ma ladniyee cishqaa
Igu laba kacleeyee
Noolaan maaya hadaad
Soo laaban weydee
Bille markii uu aqriskii dhameeyey ayaa uu ku yiri
Gabadhan waa gabar si dhab ah kuu jecel mudana in aan la xoorin ee inta aad saxiiboo isku noqoto inta dafe uu kaala tagin gabadhaan soo xero geli.
Kaalay ma adduunyadaa ii soo koobee iga daa guur ayaanba nacban nahay
Guurka waa heybada ay bani’aadamka isku soo dhaafeen ninkii nasiib leh ayaana hela ninkii naag lehna wax baa ku dheer yahay saxiib.
Wax guur la yiraahdo waan ka soo horjeeda nololna waa tan aan iminka heysto ee xuriyada ku dhisan guur la’aantii ayaan gabadha tan ugu quruxda badan ayaan habeenkasta heli karaa waa ku side saaxiib iga daa qudbadaas gabadha haddii ay ereyadeeda ku cajibiyeen orod oo raadso guurna ka dalab iyadaaba maya ku oraneynin oo guur kaga cad tahay.
Waxaan ka xumahay in gabadhaas qalbi nadiifka ah ay saaqid adiga oo kale jeclaado jaceylka waxba kama taqaanid laakiin maalin ayaa dhici doonto oo aad meel cidla ah aad ku soo dhacdo teeda kale lagama yaabo in aan fariin dambe aan kuu soo bixiyo cid kale u yeelo mailkaaga kuu kontaroosha.
Intaa markuu yiri ayaa uu ka dhaqaaqay Ayaanle wax calool jileec kama muujin hadalkii Bile
Sadiiq shaqadiisii magaalada Balackburn ayaa uu la qabsaday halka Amina Sahra ay guriga keli ku tahay balse ma aha mid niyad xun waayo iyada marnaba lama socoto xaalka ka dambeeyey safarkaan uu ku maqnaanayo ninkeeda sababta ka dambeyso qof dhaqan Lillaahi Tacaalaa ku jirta ayaa ayna aheyd balse waxa dabindaabyada wada waxa uu ahaa Sadiiq oo runta inuu wajaho ka baqaya 2 wejina ku wada noloshiisa.
Wax la tiriyo waa taagteed 3dii bilood ee Sadiiq shaqadiisa aheyd waa ay soo dhamaatay beri ayaana la filayaa inuu gurigiisa ku soo noqdo Amina soo dhaweyn heer sare ayaa ay ku jirtaa inkastoo mudooyinkaan ay iskaga daba noqoneysay dhaqtarkeeda oo u sheegay in ilmaha caloosheeda ku jira ay aad daciif u yihiin murugtaas meel kale ayaa ay ka heysay maadaama uu beri ninkeeda imaanayo ayaa manta dhaqtarkii booqatay si loo siiyo talo iyo tusaale waxaana loo sheegay in daawooyinkii ay isticmaashay ay shaqeeyeen loona sheegay in ay badiyaan kulanka iyada ninkeeda taana ay tahay dawada ugu wanaagsan ee xilligaan.
Amina Sahra waa ay ku faraxsaneyd aqbaarta wanaagsan ee loo sheegay in daawooyinkii ay qaadatay ay si wanaagsan wax u qabteen waxayna iyada oo faraxsan ka soo baxday isbitaalka waxaana ilinka isbitaalka kaga hor timid gabar Nurse ka ah isbitaalka oo la yiraahado Idil waxay ku tiri.
Waan ku salaamay Amina Sahra caafimaadka ilmahaaga ka waran
Waan kaa qaaday walaal aad ayaa ay u fiican yihiin
Adiga ima taqaanid laakiin aniga ayaa si fiican kuu aqaan ka waran haddii aad Cofee soo wada cabno ileyn shaqada waan ka soo baxay.
Ma xuma hore noo sii wad
Markiiba waxaa la tagay maqaayada hoos ku taalay oo 2 coffe la keenay intii cabistii la haayey ayaa Idil hadalkii furtay oo tiri.
Ninkaaga weli miyuu maqan yahay
Haa laakiin waxaad tahay qof wax badan ila socoto anigana kuma aqaan.
Si wanaagsan ayaan ula socdaa noloshaada waliba wax badan oo aadan la socon ayaan ka ogahay noloshaada.
Amina inta ay qososhay ayaa ay tiri
Waad iga cabsisiineysaa maxaad nolosheyda kala socotaa
Wax badan Amina in aan kuu sheegana diyaar ayaan u ahay laakiin runta ka sheeg waxba ha is giijin.
Maxaan is giijiyaa waxaad ii sheegtayba ma hayee
Ninkaaga waa nin aad adiga doortay waa nin aad kuu jecel laakiin famil xun ayaa uu leeyahay.
Waxaad ka hadleysaa hooyadii sow maaha laakiin aniga maxaa iga galay xumaanteeda ma dheri ayaa isu gaaya darsan.
Laakiin xumaanteeda waa ay ku saameysay already adigana lama socotid ka waran hee
Maxaad ka hadleysaa
Mudooyinkii ugu dambeeyey ninkaaga isbadal ma ku aragtay waliba adiga ma kugu madadaalinayaa in shaqada ay ku badan tahay.
Armaa adiga lee shar ii wadaa muxuu ahaa magacaaga.
Waxba waqtiga ha iska lumin ee nabadee.